5 Izinkinga Zomthetho Wasolwandle Zase-UAE Ezingonakalisa Ibhizinisi Lakho | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Izinkinga Ezi-5 Zomthetho Wezasolwandle Ezingonakalisa Ibhizinisi Lakho
Qonda Umthetho Wezasolwandle e-UAE
Umthetho Wezolwandle Wase-UAE Wokuhweba
Imboni Yezasolwandle iwumgogodla wezohwebo emhlabeni. Kuyimboni ebandakanya ukuhamba kwezinkulungwane zemikhumbi nezinsizakusebenza ziye emhlabeni wonke. Njengoba izilwandle zixhuma zonke izinhlobo zezindawo emhlabeni jikelele, zinikeza ithuba elikhulu lokuthutha izimpahla.
Imboni yezasolwandle iyisibonelo esihle sokuthi kunzima ukuhambisana nobunzima bomthetho. Kunemithetho eminingi ehlukene ehlobene nomkhakha wasolwandle, nezinhlobo eziningi zemikhumbi nokusebenza. Okuvame kakhulu kulezi yilezi: UMthetho Wasolwandle, Umshuwalense Wasolwandle, Ukuphathwa Kwemikhumbi, Ukubhaliswa Kwemikhumbi, Amalayisense Okusebenza Komkhumbi Namalayisense Wokuhlola Imikhumbi.
Kodwa-ke, kudinga ukuqina namandla okuqina ukuze ubambe iqhaza kwezokuthutha zasolwandle. Lokhu kungenxa yokuthi umkhakha wezentengiselwano wasolwandle ubhekene nezingozi nezingozi eziningi. Futhi, ukuba yinkimbinkimbi kwemithetho yasolwandle kwanele ukuzamazamisa ukuxazulula kwanomthengisi okhuni kakhulu.
Uma ungumnikazi webhizinisi noma ubambe iqhaza embonini yezasolwandle, le ndatshana ilokho kanye okudingayo. Ngokuqinisekile ufuna ukwazi lapho kuziwa ezindabeni zezomthetho zasolwandle ezingafaka ibhizinisi lakho engozini. Sinolwazi nje oludingayo.
Izinkinga Zomthetho Wasolwandle wase-UAE Ezingonakalisa Ibhizinisi Lakho
Umthetho Wezasolwandle wase-UAE uyinkambu yomthetho eyinkimbinkimbi futhi uxhunyaniswe neminye imithetho eminingi okwenza iseluleko sommeli oyisazi sibaluleke kakhulu. Futhi, ezikhathini zamanje kunemithetho eminingi ehlukene elawula imboni yezasolwandle okumele yonke ibhekwe.
Ukusebenza kolwandle kuncike kumasu okulawulwa kobungozi. Lokhu kufaka phakathi umshuwalense wasolwandle wentengiso. Kanjalo, kubalulekile ukuthi ujwayelane nemithetho evikela izimpahla zakho ekulahlekelweni.
Njengomnikazi webhizinisi, kufanele wazi futhi uqonde izindaba ezibucayi kakhulu zomthetho ezingabeka ibhizinisi lakho engcupheni embonini yezasolwandle yezentengiselwano. Lokhu kuzokusiza ukuthi uvikele imisebenzi yakho kwizikweletu futhi uqinisekise ukuthi ibhizinisi lakho liyaqhubeka.
Ezinye izindaba zomthetho ezingathinta ngqo ibhizinisi lakho zifaka:
Imisebenzi yokuthumba kanye neyokuduna izigebengu olwandle
Ukulimala kokuthumela imishini
Ukulahlekelwa nezimangalo zomshuwalense
# 1. Kwenzekani lapho ubhekene nezimo ezingalindelekile njengomqedazwe?
Ku-2020, ukuqubuka kwe-COVID-19 kudale umthelela omkhulu emikhakheni yezomnotho emhlabeni wonke. Futhi umkhakha wezokuthutha wasolwandle awuzange ushiye ngemuva. Njengalokhu, kwavela imibuzo ethile, eyayidinga ukuxazululwa.
Enye yezingqinamba ezavela kwaba ngumkhawulo wenani labasebenzi ababegibele. Ukuba nenani elijwayelekile elidingekayo labasebenzi phakathi nobhadane kulethe inkinga. Ukuba nabasebenzi abahlala ndawonye emkhunjini kungaba yingozi empilweni yabo futhi, ngenxa yalokho, ukuphepha komkhumbi.
Ngakolunye uhlangothi, ambalwa amalungu abasebenzi angasho amandla okuncipha okusingatha imithwalo yemfanelo ehlukahlukene. Lokhu kungaholela ekukhathaleni kwabasebenzi. Futhi ukuba nabasebenzi abakhathele kungenye yezizathu ezivame kakhulu zephutha lomuntu emkhunjini. Lokhu kungaholela ezingozini eziningana emkhunjini.
Le nkinga kunzima ukuyilawula. Uma kunengozi esuselwe kulolu daba, ubani obeka ingozi? Womabili amaqembu, noma kunjalo, angakhetha ukuxazulula le nkinga ngokuqasha abasebenzi bendawo nokubambisana nezinkampani ezahlukahlukene zokuphatha abasebenzi.
# 2. Kuthiwani ngokuthumba noma imisebenzi yokuphanga olwandle?
Abathumbi nabaphangi ngezinye zezingozi eziyingozi embonini yezasolwandle.
Ezokuphepha olwandle zithinteka kabi ngenxa yobubanzi bezinto ezingekho emthethweni. Lokhu kufaka phakathi izingalo, izidakamizwa nokushushumbiswa kwabantu, ukudoba okungekho emthethweni, ukudotshwa okungabikwa, nokungalawulwa, kanye nokungcoliswa kolwandle. IPirates ivame ukubandakanyeka kulezi zenzo ezingekho emthethweni.
Ukuphepha olwandle nakho kuthinteka ngokudunwa kwemikhumbi olwandle, ukuthumba nokubamba inkunzi kuhlonyiwe olwandle.
Uma izimpahla zakho zidlulwa yizigebengu zasolwandle noma abasebenzi bakho belimele noma bethunjwa, kuzoba nezinkinga okufanele ubhekane nazo ebhizinisini lakho. Izehlakalo ezinjengalezo zingadala ukucwila okujulile ebhizinisini lakho noma zifinyeze umsebenzi wakho wasolwandle. Ezimweni ezinjalo, uzodinga usizo lommeli osebenza olwandle.
# 3. Yimiphi imithetho okufanele isebenze uma umkhumbi wami ukwelinye izwe?
Uma umkhumbi wakho noma umkhumbi othwala imithwalo yakho ufika ethekwini, iziphathimandla zasogwini zinelungelo lokufuna izinkokhelo ezithile. Ngaphambi kwekhulu le-19, abanikazi bemikhumbi kanye nokaputeni babekhululekile ukwenza njengoba bethanda ngenkathi besakha futhi beqhuba imikhumbi yabo.
Kodwa-ke, amazwe asolwandle aqala ukubona ukuthi angavimbela izingozi olwandle ngokunaka imithetho yokwakhiwa nokusebenza kwemikhumbi.
Ngale ntuthuko, izizwe ngazinye zaqala ukwakha imithethonqubo yazo. Benza imithetho yezakhamizi zabo kanye neyabezizwe abangena emanzini abo abalawulwayo. Kepha-ke, njengoba imikhumbi yazo zonke izizwe ikhululekile ukusebenzisa ulwandle, ukwehluka kwemithetho kwaba yinkinga.
Ngakho-ke, njengomnikazi webhizinisi embonini yezasolwandle, kufanele unqume ukuthi yimiphi imithetho esebenza ezitsheni zakho ngezikhathi ezahlukahlukene. Ngalokhu, udinga ummeli onolwazi wasolwandle ukukusiza ukuthole.
# 4. Yini engiyenzayo uma nginezinkinga zokulimala kwemishini?
Omunye wemiphumela yobhadane lweCovid-19 kwaba ukuthi luvimbela ukufinyelela ekulondolozweni nasekusetshenzisweni okubalulekile. Kube nokuphazamiseka kokulethwa kwezingxenye zokungcebeleka neminye imikhiqizo eyisisekelo njengowoyela we-lube namafutha wokubacindezela. Lokhu kuphazamiseka kubambezele ukuqashwa kokuhlelwa kwemikhumbi okuhleliwe.
Kubuye kwaholela ezimweni lapho amalungu abasebenzi kufanele asebenzise amanye amabanga noma izinhlobo. Ngakho-ke, abanikazi bemikhumbi babe sengozini yokubambezeleka kanye nokonakala kwemishini phakathi nalolu bhubhane.
Ngokwengeziwe, kwabekwa imingcele yokuhamba evimbela onjiniyela abangochwepheshe ukuthi benze ukulungiswa kwemikhumbi ekufinyeleleni emikhunjini. Lokhu kwandise ingozi yokulimala kwemishini.
Ukulimazeka noma ukuphuka kwemishini sekuvele kungenye yezimbangela ezivame kakhulu zezingozi zokuthumela kule minyaka eyishumi edlule. Eyaziwa nangokuthi ukungafaneleki, umkhumbi osesimweni esingesihle kungenzeka ulimaze abasebenzi.
Uma isimo esingezansi somkhumbi singaxhunyaniswa nokulimala kwesisebenzi, lokhu kungakha izizathu zokufaka isicelo sokulimala komuntu.
Ngakho-ke, uma kwenzeka ulahlekelwa ngenxa yokuchithwa kwemishini yomkhumbi wakho nokungakwazi ukuthola unjiniyela onguchwepheshe, ngubani obhekana nezindleko zalokho kulahleka?
# 5. Ngingazinquma kanjani izimangalo zami zomshwalense nokulahleka?
Imvamisa, umkhakha wemikhumbi yokuhamba ngomkhumbi unomthelela omkhulu wokulahleka okuvela kwizimangalo zomshwalense. Lokhu kungenxa yomthetho ohlinzeka ngokuthwalwa kwesibopho sabanikazi ngomonakalo odalelwe abagibeli nabasebenzi ngesikhathi besemkhunjini.
Kuthiwani uma umkhakha wemikhumbi ye-cruise kwenzeka ukuthi iphinde igxume igiya futhi ngo-2021? Lokho kungaba izindaba ezinhle. Kodwa-ke, kusho nokuthi abanikazi bemikhumbi kungenzeka babhekane nezinyathelo zomthetho uma kwenzeka kukhanselwa noma kungaqubuka izifo ngaphakathi.
Kuthiwani ngezimangalo ezingafakwa emikhunjini yezimpahla ngenxa yokubambezeleka kokulethwa kwempahla? Lokhu kuyabulala ikakhulukazi umthwalo ongaba nokuzwela ekushiseni, okonakele noma owehle ngesikhathi.
Uma ufuna ukubhekana nale nkinga yezomthetho phambili, inkampani yakho kufanele izinikele ngokuphelele ekusebenziseni izinhlelo ezisebenzayo zokuthutha impahla. Lezi zinhlelo kumele zibandakanye ukulungiselela imicimbi engalindelekile, kusetshenziswa ubuchwepheshe obusha ukwenza umsebenzi ube lula.
Vumela i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates Ikusize Uvikele Ibhizinisi Lakho Lasolwandle
Imboni yezasolwandle njengamanje iqopha ukwanda kwamathuba emisebenzi. Lokhu ngokwengxenye kungenxa yokwanda kwe-e-commerce kanye nokuhwebelana kwembulunga yonke. Ngaphandle kwezingozi nezingozi ezichazwe ngenhla, kunezinzuzo eziningi zokuba nomsebenzi wasolwandle.
Njengomnikazi webhizinisi lasolwandle, ungaba nomholo wezibalo eziyisithupha, amathuba okuhamba, ukunakekelwa kwezempilo, kanye nemvelo yomsebenzi eyinselele. Le 'ndawo yokusebenza enselele,' okuyinzuzo, nayo iyinkinga. Kalula nje, imisebenzi yasolwandle iza nezingozi. Kungakho usidinga: abameli abangochwepheshe basolwandle e-UAE e Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants. Sinikeza ngezinsizakalo zomthetho zasolwandle ezinokwethenjelwa e-UAE.
Abameli bethu abangochwepheshe basolwandle bayakwazi futhi banentshisekelo yokuqinisekisa ukuthi wenza ibhizinisi elingaphazanyiswa neliphumelelayo elwandle e-UAE. Sinokuhlangenwe nakho ezindaweni ezahlukahlukene zomthetho wasolwandle. Kanjalo, singakusiza ukubhekana nalezi zinselelo embonini yezasolwandle. Abameli bethu bezasolwandle e-UAE banamakhono kakhulu futhi banolwazi ekuphatheni izingxabano zasolwandle. Sizokunikeza izeluleko zezomthetho ezisezingeni eliphakeme, futhi sinekhono nobuchwepheshe bokuxazulula izinkinga zakho zasolwandle. Inhloso yethu ukunciphisa umthelela wezingxabano zasolwandle ebhizinisini lakho ngokunikeza izixazululo ezingabizi kakhulu.
Inkampani yethu yezomthetho yasolwandle ese-UAE izokunikeza imininingwane efanele mayelana nezimfuneko zomthetho wasolwandle. Sizophinde sinikeze ngokugxila ngokomthetho okugxile, okusebenzayo, kanye nokwakho kwezomthetho ezindabeni zakho zasolwandle. Sinalo lonke ulwazi oludingayo ukuze ube nebhizinisi elikhiqizayo lasolwandle.
Uma ufuna imininingwane eminingi ngokuthunyelwa kolwandle nokuhweba e-UAE noma ufuna ukuthi sikusize ngezindaba zakho zasolwandle, Xhumana nathi manje.